Soo-dejinta Aermacchi MB-339 PAN FSX & P3D - Rikoooo
Massimo Taccoli, xirmo by Voyager
21 / 05 / 2017 : Updated leh horumar badan, repaints cusub, moodooyinka cusub, aaladaha news iyo saamaynta. Rakibayo version 10.1
Waayo, version FS2004 halkan riix
model Tani waa Rework dhamaystiran oo asalka MB-339A DHERI (Pattuglia Acrobatica Nazionale) sii daayay qaar ka mid ah sano ka hor la model muuqaal hagaagay, oo qol dalwaddii. Tani version cusub ee model ku jira qaabab tusaale caadiga ah ee "Frecce Tricolori", kooxda military ciyaarta dabaasha Talyaani.
Fadlan akhri tilmaamaha. Fiiro gaar ah: No guddi 2D, qol Virtual kaliya
Ogsoonow in adeegsiga koowaad FSX ayaa ku weydiin doona inaad aqbasho tilmaamaha dhowr jeer ka hor inta aanuu ku siinin kaarka add-on, tani waa caadi, waxaa jira cabirro badan.
The Aermacchi MB-339 waa tababar laba kursi Talyaani military, loogu talagalay in 1970s ay u badalo-MB 326. Quruxsan oo fiirsasho, waxa uu ku lahaa guusha isku qasan dhanka ah tartanka of diyaarad casri ah oo dheeraad ah sida Hawk Bae ah. About 200 nuqulada la dhisay, oo waxaa loo isticmaalaa by sagaal dal oo kala duwan.
Author: Massimo Taccoli, oo xiran Voyager
Xirmooyinka Tababarka Militari ee L-39 Albatros FSX & P3D